Odisha njem nchịkọta - Ntugharị njem India - Onye na-eme njem nlegharị anya - 91-993.702.7574
India bụ mba na-emegharị na ebe dị ịtụnanya ịchọta, ma n'etiti ebe ndị kasịsị atụ bụ Odisha na mba dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Bay of Bengal. Maka ndi njem nleta adventurous, Odisha - nke a maara dịka Orissa ruo 2011 - na-enye ihe oriri na-adọrọ adọrọ nke gụnyere safaris anụ ọhịa, hikes dị mma, na ụlọ arụsị ndị mara mma, Odisha ga-adị na ndepụta ịwụ njem gị, ị nwere ike ide akwụkwọ ezumike gị na Odisha Tour Packages.
Odisha, nke dị n'ebe ndịda nke ógbè West Bengali, nwere akụkọ ogologo na nke na-akpali akpali, yana omenala dị omimi na nke dị egwu. A kpọtụrụ aha na akwụkwọ akụkọ ihe karịrị puku afọ abụọ, nke pụtara na ọ bụ ebe nwere ogologo oge na-adọrọ adọrọ, mana taa bụ njem na-akpali akpali nke na-eto ngwa ngwa. Nchịkọta Njem nke Odisha na-enyere gị aka ịchọpụta ebe ndị na-adịghị ahụkebe
Kwa afọ, Njem njem Odisha aghọwanye ndị mara mma ka ọtụtụ ndị ọbịa na-abanye n'ebe dị anya na njem ndị dị ịrịba ama nke mpaghara ahụ, site na mbara ala ndị mara mma na obodo ndị dị egwu.
Taa, enwere ọtụtụ nlegharị anya ebe ndị ọbịa nwere ike ịmụta banyere akụkọ gbasara akụkọ Odisha. Ụfọdụ n'ime nlegharị anya kachasị anya na mpaghara ahụ gụnyere ihe osise nkume ndị dị na Gudahandi, nke a na-eche na ọ karịrị 20,000 afọ. Ijeghari n'ime oghere ndị a bụ ịga ije na nzọụkwụ nke ndị nna ochie anyị. Nchịkọta Njem nke Odisha hụ na ị nwere ahụmahụ maka ndụ.
Nke a bụ n'ihi na saịtị ahụ bụ ihe àmà nke ụfọdụ n'ime mmalite nke ihe a kpọrọ mmadụ, na ileta ha dịka ndị njem nleta na Odisha bụ inwe mmetụta maka ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ihe mere eme na uwe ahụ. Ebe ndị ọzọ na-atụ egwu na-adịtụbeghị anya ma ọ dịghị ihe na - adọrọ mmasị - dịka ihe dị mma nke Ụlọ Nzukọ nke Konark Sun, nke a ma ama n'ụwa dum maka ụlọ ya dị mma. Ewubere na 13th Century, ọ bụ ezie na akụkụ ụfọdụ nke ụlọ nsọ ahụ ugbu a lara n'iyi, a na-echekwa ọtụtụ n'ime ihe osise kachasị mma ma dị egwu. Site na nchịkọta Odisha njem ị ga-amata ihe bụ ịma mma.
02-03 mmadụ Dzire, 04 Ndị Etios.
Ndị 06 ndị mmadụ.
08-10 Ndị mmadụ oge Tempo.
N'abalị abalị Ụgbọ AC na Blockarkanika National Park na Swish Tent na Ịkekọrịta Ntọala na abụọ-nri ehihie, nri abalị na ụtụtụ.
N'abalị abali OBU AC na-anọ na Similipal Jungle Resort na abụọ - Nri ehihie, nri abalị & nri ụtụtụ.
Ịkwọ ụgbọ mmiri na Bhitarkanika National Park.
Na National Park Similipal 01day zuru oke ọhịa safari site NON-AC Bolero.
Nduzi maka Safari.
Inye ego maka ndị INDIAN na National Park.
Emeghị nke ọma n'oge oge ntụrụndụ (oge Durga puja, afọ ọhụrụ & oge Chistmass, ezumike mba, RathaYatra Period, oge kachasị elu)
Buru ụzọ nyochaa "Odisha Tour nchịkọta" kagbuo zara
Oge nke ụbọchị: 2 Days / 1 Night
Ndị mmadụ: 10